China 55 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy Aluminium | Mingtaishun
55 HRC Carbide 3 Fantsom-pandrefesana lava lava ho an'ny aliminioma
Mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa tsirairay isaky ny serivisy tonga lafatra sy vokatra milamina tsara. Raisinay tsara ireo mpanjifa manerantany hitsidika anay, miaraka amin'ny fiaraha-miasa misy lafiny maro, ary miara-mandroso tsena vaovao, mamorona ho avy mamiratra!
Ny haben'ny tsenanay momba ny vokatra dia nitombo isan-taona. Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny filaharana, dia aza misalasala mifandray aminay. Manantena ny hanana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny mpanjifa vaovao manerantany isika ato ho ato. Manantena ny fanontanianao sy ny filaminana izahay.
3. Azo ampiasaina amin'ny fanodinana plastika, hazo, Aluminium.copper, vy vy, vy karbonika, vy bobongolo, vy tsy misy fangarony, firaka vy vy, fitaovana vy ary vy voatsabo hafanana
1.Ny sisin'ny fanapahana manokana: Ny sisin'ny fanapahana manokana dia afaka mampitombo ny fahaizan'ny fanapahana. Ho lava kokoa ny androm-piainan'ny fitaovana sy ny milina
2.Sototra malefaka sy malalaka: Ny sodina malama sy malalaka dia hanaisotra mora kokoa ireo fikapana.
3.Fanamafisana mahatohitra hafanana: Miaraka amin'ny firakotra HELICA mahazaka hafanana dia azo ampiasaina amin'ny fikarakarana haingam-pandeha
4.volom-boasary: Eo ambanin'ny sarona volomboasary dia mora ekena ny abrasion rehetra
5.Mety avo lenta: Ny akora dia ampiasaina amin'ny hamafin'ny haavo, tungsten karbona mitovy habe amin'ny voamaina.
6. fitsaboana vita amin'ny tany: Miaraka amin'ny fitsaboana avo lenta, ny fihenan'ny coefficient an'ny friksi dia azo ahena, ny fahombiazan'ny lathe dia azo hatsaraina, ny fotoana famokarana bebe kokoa azo tehirizina
Teo aloha: 55 HRC Carbide 3 Flute Roughing End Mill ho an'ny alumium
Manaraka: 55 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills ho an'ny Aluminium tokana
HRC55 Carbide 3 Flute Long Long End Mills ho an'ny ...